Ciidamadii Milatariga ee Soo galay Muqdisho oo War Cusub kasoo baxay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Ciidamadii Milatariga ee Soo galay Muqdisho oo War Cusub kasoo baxay
Muqdisho ( Kalshaale ) Guddi saraakiila oo ay iska magacaabeen ciidamadii dhawaan soo galay Muqdisho ee saldhigyada ka dhigtay xaafado ka tirsan degmooyinka Cabdicasiis, Hodan iyo Hawl-Wadaag, ayaa shuruudo ku xiray inay dib ugu laabtaan saldhigyadii ay ka soo baxeen markoodii hore.
“Shirar ayaanu yeelanay waxaa la dhisay Gudi wadahadal la geli doono Xukuumadda Xilgaadhsiinta, in la ilaaliyo Saraynta sharciga, Ummadda Soomaaliyeed muddo ayay dhibaato kusoo jirtay, waxaana isku taagnay waa ilaalinta Sharciga iyo inaan dawladda Burburin.” Ayuu yidhi.
Waxaa wax laga waydiiyey hadalkii kasoo yeedhay Raysal wasaaraha ee uu ku sheegay inay Ciidamada dib ugu noqdaan Xeryahooda.
“Raysal wasaaraha waan maqalay Hadalkiisa, shalay markaanu halkan nimid wuu joogay, Maantana wuu joogaa, Balse waxaanu u nimid ilaalinta Sharciga, Shacabka ayaa na garab istaagay, Wax Rasaas ah maanu adeegsan, Waxaa nasoo Weeraray Ciidamo ka amar qaata Madaxwaynaha” Ayuu yidhi Diini Rooble.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=43300
3 Comments for “Ciidamadii Milatariga ee Soo galay Muqdisho oo War Cusub kasoo baxay”
May 4, 2021 - 4:14 pm
Qabiilkaaga ayaad ciidan utahay sxb qaran kulahaa hadaad ciidan qaran tahay maxaa kaasoo dhexsaaray ciidamadii kale ee aad isku midka ahaydeen
Maryacalas…. Mooryaanimo ku darsatay
Ismaan laheyn xamar ayaa qabiileysi danbe ka bilaamanayaa. Laakiin waxaa ii cadaatay inaan waxba laga baran dagaalkii sokeeye. Xamar aaney caasimad dal noqon karin oo ay tahay magaalo reereed. From now, xamar hamigaan u hayey wax badan baa iska bedelay. Ismana qaadi karto inay noqoto magaalo reereed iyo magaalo madaxdii dalka.
waxaanse ogahay inaaney dadka deegaanku qaarkood ka soo horjedaan colaada la hurinayo.
Deni iyo Ahmed madoobana wey gaadheen goolkoodii ku saleysnaa in xamar laga raro caasimada.